Iclaamin Gobol cusub: Saaxil Bari " Afhayeenka KMG ah ee beelaha Bariga Saaxil Khadar Ismaaciil Abokor"
Wednesday February 10, 2016 - 12:59:02 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Ujeeddo: Iclaamin gobolka cusub ee Saaxil Bari oo ay dhisanayaan beelaha Habar Jeclo ee deegaanka ballaadhan ee Saaxil Bari.
Berbera (BurcoOnline) 10.02.2016 Shirar goonni gooni ah iyo mid guud oo ay isugu yimaaddeen waxgaradka iyo aqoonyahanka rag iyo dumarba leh ee ka soo jeeda beelaha Habar Jeclo ee gobolka Saaxil ayaa ku qabsoomay qaaradaha Europe iyo Maraykanka. Shirarkan waxa lagu lafa gurayey mustaqbalka dadka iyo deegaankooda la iska illaaway ee kor ku xusan. Kulamadaasi waxa ka soo baxay go'aamo hordhac ah oo lagu wajahayo xaaladda deegaanka baaxadda leh ee bariga iyo koonfurta bari ee Gobolka hadda loo yaqaan Saaxil.
Waxgaradka, waayeelka iyo aqoon yahannada beelahaasi;
- Markay arkeen daandaansiga joogtada ah ee kaga imanaya beel ka mid ah beelaha ugu tirada iyo deegaanka yar Saaxil.
- Markay arkeen daayeerrada socod libaaxyeynaya ee caruurta iyo islaamaha ilka la' u soo adeegsanaya inay fidmo Eebbe nacladay kiciyaan.
- Markay arkeen abaabullada ay beeshaa yari ka waddo Berbera iyo qoobadaha yaryar ee ay gobolkaa ka degaan.
- Markay is tuseen in ka mid ahaanshaha gobolka Saaxil oo beelaha Habar Jeclo 70% (80% degmada Berbera)ka tahay aanay waxba u soo kordhin deegaannada beesha.
- Markay arkeen baahida xad-dhaafka ah ee muwaadiniinta deegaannadaasi qabaan.
- Markay arkeen dayaca adeegyada aasaasiga ah oo aan habayaraatee ka jirin deegaannadaas.
- Markay arkeen qoqobnaanta siyaadeed ee deegaamadaas iyo saami qaybsiga aedbursiinyaha loo rogay ee ka jira Saaxil.
- Markay arkeen inay, horraysiyo danbaysoba, ku qadeen dalkoodii, dawladihii illaa Ingiriis dalka ka talinayeyna ay ummaddaa qaranka dhan ah ee gobolkan u illaaween.
- Markay arkeen in beeshu wax qabsan karto hadday cududeeda midayso sida ku cad dhismaha waddada Berbera-Raaribuul oo hadda maraysa wejigii u danbeeyey.
Haddaba waxay qurbajoogta qaaradaha kor ku xusan ay isla garteen:
1. In deegaanka Saaxil yahay deegaan Habar Jeclo degganayd 600 sannadood iyo ka badan. Dhashii Jibriil Abokor Muuse Sh Isaxaaq oo tafiirtii Muse Sh Isaxaaq oo dhami ku abtirsadaani waxay ku aasan yihiin Bariga Saaxil. Tusaale ahaan dekedda Laas Muuse ee duleedka Karin waxa ku duugan oo loogu magac daray Muuse Abokor oo ka mid ah lafaha ugu ballaadhan beeshatan.
Sacad & Ciise Muuse Subeer C/raxmaan oo raggaa aan sheegay la simani waxay ku aasan yihiin Gobolka Sanaag oo ay ku tarmeen ka hor intaanay u soo doolin Saaxil. Beesha Hj waxa laga helayaa dad 18 awoow ku leh Saaxil mana aha ummad meelo kale laga sii waariday ee iyagoo deggan baa Isaaq dhulkaa dool ku yimi. Qof aan ibnu xalaal ahayn oo been lagu ababiyey uun baana taariikhdaa asalka leh dafiraya.
2. In aan beelaha Habar Jeclo aa dani ugu jirin in deegaamadoodu ka sii mid ahaadaan wixii Cigaal dhoobdhoobay ee Gobolka Saaxil ugu magac daray.
3. In deegaanka baaxadda leh ee aan kor ku xusnay u qalmo gobol sidaa darteedna ay qurbajoogta beeshu isla garatay inay seeska u dhigaan gobolkan curdinka ah.
4. In beelaha HJ ee Saaxil dega codkoodu ku xidhnaan doono ka midha dhalinta hadafkaas isla markaana beeshu marti uga tahay beelaha ay haybta wadaagaan ee Togdheer, Sool iyo Sanaag inay codkooda ugu hiiliyaan reer Saaxil Bari.
5. In gobolka cusub ee Saaxil Bari ay magaalo madax ay u noqoto bariga magaalada Berbera.
6. in maadaama magaalada reeri dhawri wada degaan in goobaha muhimka ah sida dekedda iyo airportku gacanta dawladda dhexe ku jiraan Somaliland oo dhanna u dhexeeyaan.
7.- In la dardargeliyo dhismaha iyo dayactirka dekedaha Geel Gerde u horrayso ee ay ka midka yihiin Laas Muuse, Karin, Ceeldaraad.
8- In deegaanka Batalaale oo hoos iman doona gobolka cusub la maalgeliyo loona tixgeliyo il ka mida ilaha dalxiiska gobolka Saaxil Bari.
9- In suuqyo loo raadiyo khayraadka dabiiciga ah ee deegaammadaas sida Beeyada, kalluunka, macaadinta iwm. Lana soo dhaweeyo ciddii Somaliland ah ee maalgashanaysa.
10. In, xalaal dharaarbaa la qashaaye, beelaha laga tirada & deegaanka badan yahay ee gobolkan lagu wargeliyo hadafka beelaha Habar Jeclo si aan tuhun iyo madmadow u iman.
11. In la aasaaso ciidan budhcad badeedda iyo maraakiibta qashinka ku daadinaya xeebta dihin ee gobolka cusub la sameeyo laguna xoojiyo ciidamada ilaalada xeebaha.
12. "Afkoo kaa xumaadoyo guunimo waa isku itaale". Ina Cadille Xasan baa beri y-da looga soo gabyey markaasuu yidhi "ya'da gabay lagagama jawaabee gacan baa laga jawaabaa". Beelaha Habar Jeclo ma yaqaannaan yooyootanka, shir jaraaid oo la qabto, iyo in Tv-yada la iska caayo ee maanta ka dib waxanu xaq u leennahay inaanu shakhsiyaadka iyo beelaha na deyn waaya gacan bir ah ku qabanno.
Danba way u ducan!
Afhayeenka KMG ah ee beelaha Bariga Saaxil
Khadar Ismaaciil Abokor